I-Bellagio-Werder yeholide yokuhlala - I-Airbnb
I-Bellagio-Werder yeholide yokuhlala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCarola
Indawo yethu yeholide epholileyo yaphinda yaqinisekiswa ngeenkwenkwezi ezi-4 nguMbutho wabakhenkethi (HVL) ngo-2016.
Yakhiwe malunga ne-60 ye-square metres yendawo yokuhlala kunye ne-terrace emalunga ne-20 ye-square metres kubantu abane.
Igumbi lokuhlala lahlulwe laba yindawo yokuhlala, ikhitshi kunye nendawo yokutyela. Ikhitshi lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya, isitovu seceramic, i-oveni, ifriji-isikhenkcisi, iketile, umenzi wekofu, itoaster kunye nemicrowave.
Igumbi lokuhlambela linokufudumala okuphantsi, ishawa yempilo kunye nomatshini wokuhlamba.
Indawo yethu yokuhlala ikwisithili esizolileyo sasePhöben kwisixeko saseWerder / Havel. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwiintsapho okanye abo bacinezelekileyo.
5.0 · Izimvo eziyi-31
Ukusondela kweHavel kuvula amathuba amaninzi okufumana indalo emhlabeni, kwindlela yebhayisekile kunye nasemanzini. Iinketho zokurenta izikhephe ziyafumaneka kwisiza. Kukwakho nendawo yokuqubha kwiHavel kunye nebala elikhulu nelincinci lokudlala labantwana. Kukho iifama zamahashe kunye nebala legalufa kwindawo ekufutshane.
Enkosi kuqhagamshelo lukaloliwe e-Werder, ePotsdam naseBerlin nako kungafikelelwa ngezithuthi zikawonke-wonke rhoqo ngesiqingatha seyure ngexesha elifutshane kakhulu. Akukho nanye imida kwimisebenzi ekufutshane nakude, ekhatshwa ukuphumla kunye nokukhululeka.
Umbuki zindwendwe ngu- Carola
Njengomthetho, umntu uya kuba endlwini ngexesha lokuhlala kwakho kwaye uya kukuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Werder (Havel)